FAKANA TANIN’OLONA ANY ANTSIRANANA II : Mandrahona ny hitokona ny mponina ao Ankoririky Hely
Mampiteny ny moana ny fakàna tany ataon’ny mpandraharaha iray antsoina hoe S. B. ao amin’ny fokontany Ankoririky hely, kaominina ambanivohitra Ramena, distrikan’ Antsiranana II. 2 octobre 2020
Amin’ny fomba feno hafetsena ary an-keriny no hakany tanin’olona na tanim-panjakana ao an-toerana. Mazava ho azy fa tsy tanteraka izay raha tsy misy firaisana tsikombakomba amin’ny tompon’ andraikitra sasany eo anivon’ny sampandraharahan’ny Fananantany ao Antsiranana. Saika lasan’ity mpandraharaha avokoa ny tany ao Ankoririky sy manodidina.
« Lasan’i S. B. avokoa ny tany ato Ankoririky hely eo anelanelan’ny “domaine public militaries” sy tany antsoina hoe “Mon Joie” izay an’ny orinasa SCIM », hoy ny mponina ao Ankoririky hely. « Alain’i S. B. ireo tany midadasika ireo rehefa avy eo dia amidiny amin’ny vazaha na Karàna sy ireo mpanan-karena hafa », hoy hatrany ireto farany. Nijoro vavolombelona amin’ny fakàna tanin’olona ataon’ity mpandraharaha ity ny raim-pianakaviana antsoina hoe Jean Tisy.
« Tany izay nangatahiko efa nahazoako « titre provisoire » ary efa nandoavako vola teny amin’ny sampandraharahan’ny Fananantany mirefy 28 ha no nalain’i S. B. sy ny mpiasan’ity sampandraharaha ity anankiray. Nanao ny fomba rehetra mampiasa hafetsena vola sy fanamparam-pahefana izy ireo nanesorana ahy amin’ny taniko », hoy izy.
Na izany na tsy izany nilaza tsy hanaiky ity farany ary hiakatra any Antananarivo hametraka fitarainana sy fitoriana ary hanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety. Betsaka ireo olona iharan’ny asa ratsin’ity mpandraharaha ity any amin’ny tapany avaratry ny Nosy ary mbola hotaterinay eto amin’ny manaraka. Ny mahagaga ny maro anefa dia ny fahitana fa toa manjaka mihitsy ny lehilahy ao amin’ny sampandraharahan’ny fananantany ao Antsiranana eny fa na any amin’ny foiben’ny fananantany any Antananarivo. « Hivory izahay ato ho ato ary hitokona raha ilaina ho fanoherana ny fakàna tany ataon’i S. B. sy ny forongony aty Ankoririky hely. Lasa izahay fokonolona indray no mangataka ny atiny », hoy ny mponina ao Ankoririky hely.